गर्भवती हुने विश्वासले सिरहाको पतारी पोखरीमा स्नान गर्ने महिलाको भिड
लैङ्गिक हिंसा र अपराध नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालन हुने
कमलामा वेपत्ता तीनै जनाको शव भेटियो
चोरिएको सात महिने शिशुको शव खेतमा भेटियो
कमलामा वेपत्ता तीन मध्ये दुईको शव भेटियो, एक अझै अज्ञात
लक्ष्मीपुर पतारीमा एक महिला बलात्कृत, आरोपित फरार
यसरी भयो वेपत्ता कारीदेवीको हत्या
लहानको एक लजमा महिला बलात्कृत
लहान नगरपालिकामा कांग्रेसलाई हराउँदै एमाले विजयी, १६ स्थानीय तहको नतिजा आउँदा माओवादी पहिलो, एमाले दोस्रो
सिरहाको बाखरमा गंगोत्री कृषि सहकारी
लहान, २ बैशाख । सिरहा जिल्लामा रहेको पतारी नामको पोखरीमा नयाँ वर्षको दोस्रो दिन नुहाउने महिलाहरुको ठूलो भिड लाग्छ । यसको कारण हो– सन्तान प्राप्ति । स्नान गरेको दोस्रो वर्षभित्र गर्भवती हुने पक्का भएपछि नुहाउनेहरु किन भिड नलागून् !
नि:सन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिका लागि चिकित्सा विज्ञानले धेरै विधिहरु आविस्कार गरिसकेको छ । तर, पोखरीमा महिलाले स्नान गरेपछि गर्भवती हुने गरेको कुरा सुन्दा पत्यार नगर्नु स्वाभाविकै पनि हो । तर मानिसहरुमा सांस्कृतिक र धामिर्क आस्था कति छ भन्ने उदाहरण हो, सिरहाको पतारी पोखरी जहाँ हरेक वर्ष वैसाख २ गते नि:सन्तान महिलाहरु स्नान गर्न आउँछन् र सो दृश्य हेर्न लाखौको संख्यामा दर्शकहरुको मेला नै लाग्ने गर्दछ । पूर्व–पश्चिम सडकको छपराडि र धनगढी बजारबाट करिब १० किलोकमीटर दक्षिणमा पर्ने महेशपुर पतारी गा.वि.स. मा रहेको पतारी पोखरी हेर्दा कुनै विशेष भने लाग्दैन ।
मेलामा छिमेकी भारतको बिहारस्थित पटना, मधुवनी, दरभंगा, जयनगरसहित नेपालका विशेषगरी तराई मधेश र तराई मधेशले छोएका विभिन्न जिल्लाहरुबाट नि:सन्तान दम्पतीहरु सन्तान प्राप्तिको आकाङ्क्षासहित त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् ।
करिब ४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरीको दक्षिणी किनारमा रहेको राजहरि सिंहदेवको गहवरको पूर्वी ढोकामा वैशाख १ गते साँझदेखि निरन्तर १८ घण्टासम्म निराहार बसेर भोलिपल्ट मध्यान्ह गहवरभित्र रहने विशेष आराधना (कोकिया गुहाइर) बाट अक्षता लिएर गहवरको उत्तरी गेटबाट सीधै पोखरीमा हाम फाल्नु पर्ने मान्यता रहेको छ । त्यसरी हाम फालेपछि पोखरीमा पहिलो डुबुल्कीमै पानीभित्र कुनै पनि जीव भेटिए सन्तान हुने विश्वास गरिन्छ ।
पानीमा भेटिएको जीव मुठ्ठीमै राखेर दौडिंदै गाउँको सीमा पार गर्नुपर्ने मान्यता अनुरुप पोखरीबाट निस्केका भक्तजनहरुको पछि–पछि आउने आफन्तले गाउँको सीमा कटेपछि कपडा फेरिदिने गर्दछन् । कपडा फेरेर आफ्नो घर पुगेपछि पानीबाट ल्याएको जीवको बुटी बनाएर ब्रत बसेका महिलाले पाखुरा या घाँटीको मालामा राखे सन्तान प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ ।
पतारी पाखरीको पानी स्थानीयले पवित्रताका लागि भोजनालयमा समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । पोखरीको नजिक वरिपरि रहेको गाउँका सम्पूर्ण घरपरिवारमा भान्सामा उक्त पोखरीको पानी शुद्धिका लागि प्रयोग गर्ने गरेको महेशपुर पतारी ५ बस्ने राजीन्द्र मण्डलले बताउनुभयो ।
उक्त मन्दिरमा नियमित पूजा गर्ने पुजारी लक्ष्मीपुर पतारी ५ बस्ने उग्रदेव सिंहका अनुसार पोखरीको वरिपरी नजिक रहेको गाउँका घरपरिवारमा नियमित उक्त पोखरीको पानी प्रयोग गर्छन् । लक्षमीपुर पतारी र महेशपुर पतारी गाविसमा हुने सार्वजनिक भोजभतेरमा अनिवार्य रुपमा यस पोखरीको पानी शुद्धिका लागि लाने गरिन्छ । उनले भने– जुन सार्वजनिक भोज भतेरमा यस पोखरीको पानी प्रयोग गरिदैन त्यो भोजको भात लगायतका परिकारहरु विग्रने गरेको छ त्यसैले अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
सलहेश गाथामा उल्लेख गरिएअनुसार पतारी पकडियाका राजा कुलेसरका कान्छा भाइ हरिसिंहदेवको निवासस्थल रहेको मानिन्छ । पोखरी राजा सलहेशकै बेला वि.सं. १३२५ तिरदेखि अस्तित्वमा रहेको सलहेश गाथामा उल्लेख छ ।
वैशाख २ गते नै पकडिया गढमा पनि विशेष मेला लाग्ने गर्दछ । पकडिया गढ राजा सलहेशलाई चोरीको आरोप लागेको ठाउँ रहेको लोक मान्यता रहेको छ । उक्त ठाउँ सिरहाको लहानबजारदेखि करिब ४ किलोमिटर उत्तरतिर साविक भदैया गा.वि.स. वार्ड नं. ४ हाल लहान नगरपालिका वडा नम्वर १८ अमहीमा चुरे पर्वत श्रृंखलाको काखमा पर्दछ । लहानदेखि ४ कि.मी. उत्तर पूर्वतिर कंचनगढ भन्ने ठाउँ थियो, जुन ठाउँ अहिले अस्तित्वमा छैन, सलहेश गाथामा वर्णन गरिए अनुसार सम्भवत: यही ठाउँमा पकडियाको राजदरवार थियो । पकडिया गढमा एउटा पोखरी र त्यसको डिलमा राजा कुलेसरको मन्दिर छ, जहाँ उनको पूजासमेत गरिन्छ ।
सलहेशलाई राजा कुलेसरको दरवारको चौकीदारको रुपमा लिइने भएकाले उनको छुट्टै पूजा गरिंदैन । सलहेश गाथामा उल्लेख गरिएअनुसार राजा सलहेशलाई पकडिडया गढ घुम्ने इच्छा भएपछि त्यहाँ पुगेको र त्यहाँ रहेको फूलबारीमा एकछिन सुस्ताउन बस्दा राजकुमारी चन्द्रवती फूल टिप्न पुगेकी थिइन् । सलहेलाई देखेर चन्द्रावती मोहित भइन्, उनले सलहेशसँग आफूलाई पत्नीको रुपमा स्वीकार्न आग्रह गरिन्, तर उनले अस्वीकार गरे । अपमान र आक्रोशले विक्षिप्त राजकुमारीले आफ्ना पिता राजा कुलेसरलाई आफ्नो इज्जत लुट्ने प्रयास गरेको झुटो उजुरी दिइन् ।
त्यस्तो जानकारी पाएपछि राजा कुलेसरले सलहेशलाई पक्रेर ल्याउने आदेश दिए । त्यही आरोपमा राजकुमारीको आग्रह बमोजिम सलहेशलाई चन्द्रवतीको महलको चौकीदार नियुक्त गरिएको जनविश्वास रहेको पुजारी हरिनारायण दासले बताउनुभयो ।